Waxaan isku dayay inaan sameeyo SEO-yada organic, laakiin farsamooyinka SEO-yada ah ee organic ma shaqeeyaan. Maxaan sameeyaa?
Waxay timaaddaa iyada oo aan sheegin in ujeedada ugu dambeysa ee farsamooyinka SEO-yada ah ay tahay in lagu gaaro horumar joogta ah oo muddo dheer socota oo ku socda gaadiidka dabiiciga ah. Taas macnaheedu waa in marka ugu horeysa ee la isticmaalo farsamooyinka farsamada SEO ee loo isticmaalo saxda ah, website-kaagu waa inuu arkaa tirada sii kordheysa ee soo-booqdayaasha dhabta ah, oo si toos ah looga keenay natiijooyinka raadinta Google (SERPs). Laakiin waa in la sameeyaa, marka ay dhacdo in farsamooyinka SEO-ga ah ee aad isticmaasho aad ku fashilmeen in ay keenaan guulo dheeraad ah ee gaadiidka? Haddii ay sidaas dhacdo, hoos waxaa ku qoran liis kooban oo ficil ah si aad u tijaabisid oo aad wax uga qabatid xaaladdaada.
Ka hor inta kale, waxaan kugula talinayaa in aad eegtid boggaaga si aad u hesho ganaax qoraal ah Google. Waxaa lagu tijaabin karaa si sahlan, sida caadiga ah sida caadiga ah sida jumladu waxay ku timaadaa ogaysiin ku jirta Google Search Console. Haddii ay dhacdo in bogaggaaga boggaguba uu dhab ahaantii lumiyo taraafikada qaarkood (ha ahaato waxyaabo daciif ah ama aan ka mid ahayn waxyaabo aan tayo lahayn, spammy, ama mashiinnada mashiinka ceymiska SEO), waxaad si fiican u hagaajin lahayd arimahan sida ugu dhakhsaha badan - best adventure trips in south america.
Marka la eego inaad weli ka muuqato xayndaab kasta oo Google ah, waa inaad eegtaa qaybaha ugu muhiimsan ee boggaaga, taas oo la kulantay dhibka ugu xun ee gaadiidka. Dhinaca kale, haddii dhacdadani u muuqato in ay noqoto mid isugeyn ah, waxay u badan tahay in aad haysatid dhibaato leh keywords gaar ah ama keyfrases aad khalad u isticmaaleyso dhowr qaybood oo ka mid ah boggaaga. Haddii kale, haddii dariiqaaga gaadiidkaagu u muuqdo inuu la xidhiidho bogga internetka ee gaarka ah, waxaa lagugula talinayaa inaad eegto bogagga boggooda. Waxay u badan tahay farsamooyinkaaga SEO-yada ah ee bani-aadamka joojiyay keenista horay u socotay, gaar ahaan xadgudubyada gadaashooda.
Marka xigta, waa inaad eegtaa tartankaaga boggaaga, isbedelada ugu dambeeyay ee dhici karta labadii ama sadexdii bilood ee la soo dhaafay. Xaaladahan oo kale waxay u badan tahay inay dhacdo inta lagu jiro marxaladaha ugu horreeya ee xilliga bilaabashada bilaabashada ama haddii aad ku lug leedahay warshadaha casriga ah ama ganacsiga horumarinta software halkaas oo heerka caadiga ah ee tartanka uu yahay kan ugu xun. First of all, hubi jagooyinka aad raadineyso hadda ee keywords keywords si aad u aragto sida saxda ah ee meelaha aad tartanka ugu dhow u suurta gashay inay hogaamiyaan hogaanka. Waxaa laga yaabaa inay heystaan ​​waxyaabo sax ah oo wanaagsan ama xiriiriyaal tayo leh oo dheeraad ah? Si kastaba ha ahaatee, xusuusnow, in sababta ugu weyn ee halkan ay noqon karto mid sahlan - rakibayaashu waxay sidoo kale dhici karaan inay dhawaan maalgashadaan farsamooyinka SEO-ga ah si ay ugu taliyaan boosaskii hore. Haddii ay sidaas dhacdo, waxaan soo jeedinayaa in lagu beegsado tallaabooyin madax-madax ah oo lagu guulaysto tartanka saxda ah ee hadda, ama aad si macquul ah u heli karto cilmi-baaris qotodheer oo muhiim ah si loo doorto ereyo kale oo gaar ah oo dheer bilaw inaad dib u hesho gawaaridaada.
Ka dib oo dhan, farsamooyinkaaga SEO ee hadda organic ayaa laga yaabaa in lumiyo qasaca, sababo kale sababo kale. Sidaa darteed, tartamayaashaada ayaa laga yaabaa inay sidoo kale qaadan karaan hogaanka iyaga oo aan ujeedadooda ujeeddadoodu. Habkaas, waxaa lagugula talinayaa in aad ku noqotid bogaggaaga internetka oo aad waxbartid waxqabadkooda dhismaha isku xirka iyo marxaladda goobta mar kale.